Maraykanku kuma dhaco inuu weerar nagu soo qaado: Iiraan - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Ayadoo baryahan ay jirtey in xagjir Taram uu sheegay inuu Markab dagaal u direy badda Iiraan iyo weliba diyaaradaha isqariya ee dagaalka oo lagu arkey Qadar, ayaa Iiraan jawaab kulul ka bixisay. ”Maraykanku ukuma dhaco inuu na soo weeraro waxaa aad u jeedaana waa afka baarkiis. Xagjir Taram ayaa ka baxay heshiiskii uu Obaama la galay Iiraan ee dhimista hubka Nukliyeerka.
Iiraan ayaa dhawaan ku dhawaaqdey inay yaraysay qayb ka mida heshiiskaas maadaama cunaqabatayn uu saaray xagjir Taram si ay u buuxiso qaybtaas ay ku lumisay cubnaqataynta.
Wadamadii Yurub ee iyagu kula jiray heshiiska ayaa sheegay in Iiraan sideeda u fuliso heshiiska oo iyagu ay u fur doonaan heshiis gaar u ah inkastoo taasi wellio dhicin.
Wadamada Iiraan taageera ee Ruushka iyo Shiinaha ayaa iyagu sheegay inay ka wada hadli doonaan hanjabaada Maraykanku ku hayo Iiraan. Afhayeen u hadley ciidamada difaaca Jamhuuriyada Iiraan ayaa sheegay in markabka xagjir Taram soo direy ay ku filan hal gantaal. ”Balaayiin doolar ayaa kaga baxay waxase ku filan hal gantaal oo aan ku dhifano markabkaas dagaal ee diyaaraduhu fuushan yihiin ayuu yiri Aayatullah Yuusuf.
Iiraan ayaa hore u qarxisay Markab noocaasa oo iyadu samaysay waxayna u egyihiin kuwa si fiican ugu diyaara haddii markabkaas soo galo biyaha Iiraan. Waxa kale oo Ruushku siiyay gantaalaha S-300 oo waxba la’an ka dhigaya weerar cirka ah. Iiraan aya ka mida wadamada Muslimka ah ee cadowgooda u diyaar garooba ee aan is dhiibin.
Itoobiya oo diidey fikir cusub oo ka yimi Masar ee dhanka biyo xidheenka
Dawlada Itoobiya ayaa ku gacan saydhey fikir cusub ...
Waa sidee xaalada caafimaad ee fanaanada weyn ee Maryan Mursal
Fanaanada weyn ee Maryan Mursal ayaa hadda ku ...
Jabhad Ka dilaacday gobolka Awdal oo la xaqiijay
Gudoomiye xigeenka koowaad ee xisbiga Faysal Waraabe Qaasim ...
Madaxweynaha Somaliya oo saxiixay sharci muhiim u ah dalka
Madaxweynaha Somaliya Maxamed Farmaajo ayaa qalinka ku duugey ...
Dawlada Somaliya oo xilli u qabatey looga cafiyo deymaha
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaliya Dr Cabdiraxmaan Ducaale ...
Dawlada Yaman oo wacad ku martey inay garaacdo Abu-dabay
Dawlada Yaman ee ay hogaanka u hayaan Xuutiyiinta ...
Muuse Biixi oo hooyooyinka u sheegay inay muruqa muujiyaan
Horjoogaha maamulka Somaliland oo Burco Ka furtey garoob ...
Safaarada Somaliya ee Kiiniya oo beenisay war jirdila
Safaarada Somaliya ku leedahay Kiiniya ayaa beenisay in ...
Fadhiga suuli dahab ka samaysan oo la xaday iyo qiimaha uu taagnaa
September, 14, 2019
Fadhiga Musqul dahab Ka samaysan oo uu farsameeyay ...
Diyaarad bad ku dul socota iyo baylood bun ka daatey maxaa dhacay kadib?
Diyaarad rakaab badan sida ayaa Ka soo duushey ...
Haad markii ugu horeysay ilmo yar ku cuney ismaamulka Somali Galbeed
Haad ama galaydh kolba sida Somalidu u taqaano ...
Gabdho maqaayad ku leh Burco oo qarka u saaran inay ka guuraan magaalada: WARBIXIN
September, 7, 2019
Dhawaan ayay ahayd markii maqaayada Warsan ee magaalada ...